November 2017 - Page3of4- Glamorous Icon
Monthly Archives: २३ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०८:३३
Home›२३ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०८:३३›२३ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०८:३३ (Page 3)
यो बर्ष बक्स अफिसमा धमाका मच्चाउन सफल चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’ अब कतारमा पनि प्रदर्शन हुने भएको छ । यो चलचित्र नोभेम्बर १० अर्थात आगामी शुक्रबार सनैयास्थित ग्रान्ड मल नजिकै रहेको एसियन टाउन सिनेमाको हल नम्बर ३ मा प्रदर्शन हुन लागेको हो । दिउँसो सवा २ बजेबाट चलचित्रको शो सुरु हुनेछ । कस्तो राम्रो इभेन्ट्सले ...
२३ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०८:२३
केही दिन अगाडि आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा कलाकार निर शाहले भनेका थिए कि-‘दयाहाङ जस्ता कलाकार ५० बर्षमा एकपटक जन्मन्छन् । जसले, अभिनयको रुप नै बदलिदिन्छिन् ।’ शुक्रबारदेखि रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘तान्द्रो’को प्रिमियरमा नायक दयाहाङ राइको अभिनय हेरेपछि धेरैले निर शाहको उक्त भनाई संझिए । चलचित्रको पुरा अंशमा अधिकांश समय दयाहाङ फ्रेममा एक्लै छन् । ...
२३ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०८:१५
कात्तिक २४ गते अर्थात शुक्रबारबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘रोमियो’लाई सबै उमेरका दर्शकले हेर्न पाउने भएका छन् । यो चलचित्रलाई सेन्सर बोर्डले यू सर्टिफिकेट दिएको छ । शंकर कार्कीको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रमा हसनराजा खान, निशा अधिकारी, ओसिमा बनु र मेलिना मानन्धरको मुख्य भूमिका छ । चलचित्रमा नायिका नीशा अधिकारी ‘कल गल’को भूमिकामा छिन् ...
लैनचौरस्थित होटल मल्लमा सम्पन्न ‘मिस काठमाडौं’को उपाधि ऐञ्जल खातीले जितेकी छिन् । उक्त इभेन्टमा एलिशा तामाङ् दोस्रो रनअर अप हुँदा अष्मिता शर्मा थर्ड रनअर अप बन्न सफल भएकी छिन् । ११ मोडल सहभागी उक्त इभेन्टमा शशी रुम्बा फोर्थ रनअर अप बन्न सफल भएकी छिन् । इभेन्ट कसमस इन्टरटेन्मेन्टको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो । गत साता ...
२२ कार्तिक २०७४, बुधबार ०४:४९
डिसेम्बर २२ मा रिलिज हुन लागेको सलमान खान र नायिका कट्रिना कैफ अभिनित चलचित्र ‘टाइगर जिन्दा हे’को ट्रेलर रिलिज भएको छ । आज रिलिज भएको ट्रेलरमा सलमानको एक्सन अवतार देख्न सकिन्छ । अली अब्बास जफरले निर्देशन गरेको यो चलचित्रलाई यशराज ब्यानरले निर्माण गरेका हो । ट्रेलरमा विश्वकै शक्तिशाली आतंकवादी समुहबाट अपरहणमा परेका २२ जना भारतीय ...
२१ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०६:३०
पौष ७ गते काठमाण्डौमा ‘आइइसी डिजाइनस् रनवे सेसन ७’को आयोजना हुने भएको छ । कामाण्डौको हायत रिजेन्सी होटलमा हुने फेशन शोको आयोजना आइइसी कलेज अफ फेसन एण्ड आर्टले गर्न लागेको हो । यो फेसन शोमा कलेजमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीले तयार पारेका बिभिन्न अन्तरराष्ट्रिय डिजाइनहरु प्रदर्शन र प्रवर्द्धन गर्ने उदेश्य रहेको आयोजकले बताएको छ । यो ...
इभरलास्ट इन्फोटेकको आयोजनामा चितवनको क्याम्पाचौरमा मंसिर २ गते नेपालका चर्चित ब्याण्डहरुको साथमा ‘म्यूजिकल फेस्टिभ’ आयोजना हुने भएको छ । दिउँसो १ बजेबाट बेलुकी ९ बजेसम्म चल्ने कार्यक्रममा चर्चित ब्याण्डहरुले दर्शक झुमाउनेछन् । दर्शकको उल्लेख्य सहभागीता होस् भन्ने हेतुले क्याम्पाचौरमा कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको आयोजकले बताएको छ । यो कार्यक्रममा ‘द स्याडोज नेपाल, ए एट ब्याण्ड, ...
२० कार्तिक २०७४, सोमबार ०६:१४
नेपाल आइडलको व्यस्तता उत्तिकै छ । दुई महिना पुग्न लाग्दा उनीहरुले देश विदेश कन्सर्टमा सहभागिता जनाएका छन् । टप थ्रीसँगै सागर आले मगर लगायतको व्यस्तता उत्तिकै छ । यही मंसिर २ गते शनिबार जावलाखेल फुटबल मैदानमा भव्य कन्सर्ट आयोजना भएको छ । नेपाल आइडल बुद्ध लामा, फस्र्ट रनरअप निशान भट्टराई, सेकेण्ड रनर अप प्रताप दासले जावलाखेल ...
दीपाश्री निरौलाको निर्देशन तथा दीपकराज गिरि र विभिन्न हाँस्य कलाकारको संलग्नतामा बनाइएको चलचित्र ‘छक्का पन्जा-२’ हेर्न डीसीमा घुइचो हुनुको साथै चलचित्र मन्दिर भरिभराउ भएको छ । अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रको भर्जिनियामा प्रदर्शित भएको उक्त चलचित्र हेर्न दुई दिनदेखि अविरल वर्षा भएता अमेरिकामा जन्मिएका बालबालिकाहरुको साथै बिभिन्न पेशामा संलग्न व्यक्तिहरु,बुवाआमा,हजुरबुवा हजुरआमाहरु समेत चलचित्र हेर्न आएका थिए । ...
The first season of Mister and Miss Teen World Nepal 2017 has ended this Saturday finalizing Pankaj Singh Thakuri and Swasti Baidya as the winners. They would officially represent Nepal at World finale going to be held in Brazil. In the event showcased at Army officers club, Sundhara Pankaj and Swasti both earned the best ...